Orexin1 receptor ရန်လိုသောအပြုအမူနှင့်စိုးရိမ်မှုများအတွက်: ဖြစ်နိုင်သောကုထုံးအသုံးပြုမှု (2014) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
တပ်ဦး neuroscience ။ 2014; 8: 26 ။
2014 ဖေဖော်ဝါရီ 13 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fnins.2014.00026
Emilio Merlo Pich1,* နှင့် ဆာဂျီယို Melotto2
တဆယ်ငါးနှစ် hypocretin / orexin ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြီးတွင်သက်သေအထောက်အထား၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်အများအပြားစည်းမျဉ်းဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာများမော်ဂျူအတွက်၎င်း၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ပံ့စုဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ hypocretin / orexin ၏လျော့ချအဆင့်ဆင့်ကနဦး narcolepsy နှင့်ဆက်စပ်လျက်နေကြစဉ်တွင်, တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်အထူးသဖြင့်, အိပ်မပျော်ခြင်း, hypervigilance ၏ရောဂါဗေဒပြည်နယ်များမှမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနှင့်ဆက်စပ်နှင့်ပြီ။ အိပ်မပျော်၏အရိပ်အယောင်များအတွက် Dual-လှုပ်ရှားမှု orexin အဲဒီ receptor ရန် (Dora) suvorexant ၏ FDA ကမှဖိုင်ကိုနောက်ထပ်ထိုကဲ့သို့သောအထောက်အထားများ၏အားကောင်း corroborates ။ သို့သော်အလွန်အကျွံသတိဝီရိယအဖြစ်ကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ထိတ်လန့်ဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ပုံမှန်အဖြစ်ဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်မမှန်အတွက် abstinence နှင့်တဏှာသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုငါတို့သည်ခေတ္တ hypocretin / orexin အဲဒီ receptor 1 (OX1) ဤလက္ခဏာများဘို့ရန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောက်ပံ့အထောက်အထားဆွေးနွေးပါ။ အဆိုပါ OX1 ရန် SB-334867 နှင့် Mutant ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးစမ်းသပ်ချက်အီသနော, နီကိုတင်း, ကင်း, cannabinoids နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ရှာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ compulsive reinstatement ဖြန်ဖြေအတွက် OX1 အဲဒီ receptor ပါဝင်ကြသည်။ ပိုများသောမကြာသေးမီက, ဒေတာဖိအားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထိတ်လန့်-inducing အေးဂျင့်မှအမူအကျင့်များနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ဝတ္ထုရွေးချယ် OX1 ရန် GSK1059865 နှင့် ACT-335827 နှင့်အတူနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပါပြီ။ နိဂုံးချုပ်, pharmacologic data တွေကိုလူသားတွေအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တွင်, Bing စားနှင့်တော့ပူပန် Disorders တစ်ခု OX1 အဲဒီ receptor ရန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
keywords: မူးယစ်ဆေးစွဲ, relapse, Bing စားထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, အပြုအမူ, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, OX1 အဲဒီ receptor ရန်, GSK1059865
Hypocretin / orexin အသီးသီး 33 နှင့် 28 အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပါဝင်တဲ့နှစ်ခုပုံစံများ, A နှင့် B, ပါဝင်သည်ဟုတစ်ခု hypothalamic neuropeptide ဖြစ်ပြီး, နှစ်ခု, G-ပရိုတိန်း coupled receptors, OX1 (သို့မဟုတ် hcrt-1) မှ binding နှင့် OX2 (သို့မဟုတ် hcrt-2) ( က de Lecea et al ။ , 1998; Sakurai et al ။ , 1998).
အဆိုပါ hypocretin / orexin peptide ဟာ dorsomedial-perifornical hypothalamic ဧရိယာ (ဇလဌာန / PeF) နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic နျူကလိယ (LH) တွင်တည်ရှိသောအာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့လူဦးရေအတွက်ထုတ်လုပ်နေသည်။ positive အာရုံကြောအမျှင်များနှင့်ဆိပ်ကမ်းမရေအာရုံကြော, ကျောရိုး, brainstem, hypothalamus, thalamus, limbic စနစ်, နှင့်အချို့သော cortical ဒေသများ (Peyron et al အပါအဝင်ဗဟိုနှင့်အရံဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အတော်ကြာဒေသများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ , 1998; ချက်ကိုဟိုင်နိုနင် et al ။ , 2008) ။ နွားသည် / hcrt receptors Marcus et al (ကအလားတူတိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးပြသ။ , 2001), ဂျွန်ဆင် et al (တော်တော်များများ adapter နဲ့ limbic စနစ်ကထိန်းချုပ်ထားသည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်စည်းမျဉ်း peptides အဖြစ် hypocretins / orexins ၏အလားအလာသည်သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း။ , 2012a,b; Mahler et al ။ , 2012; Boutrel et al ။ , 2013; Tsujino နှင့် Sakurai, 2013).
အဆိုပါ OX1 အဲဒီ receptor Sakurai et 425% ၏နှစ်ခု receptors အကြားတစ်ဦး sequence ကိုတူ (အယ်လ်အတူ2အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါဝင်သည်နေစဉ် OX444 အဲဒီ receptor 68 အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါရှိသည်။ , 1998) ။ နှစ်ဦးစလုံး receptors Gq-ပရိုတိန်းနှင့်အတူဒွန်တွဲနေကြသည်နေစဉ်, သာ OX1 အဲဒီ receptor ဒါ့အပြင် GS-ပရိုတိန်းနှင့်အတူဒွန်တွဲနေသည်။ receptor activation တစ် Gq -dependent phospholipase ကို C (PLC) ကနေတဆင့် intracellular ကယ်လစီယမ်အဆင့်ဆင့်တိုးပွါး inositol-1,4,5-triphosphate (Lund et al ၏တိုး -mediated ။ , 2000) နှင့် diacylglycerol, ပရိုတိန်း kinase နောက်ဆုံးမှာ ERK phosphorylation လမ်းကြောင်း (Ekholm et al ပါဝငျကို C ၏δပုံစံ၏ activation အတွက်ရရှိလာတဲ့။ , 2007).
OX1 နှင့် OX2 receptors differential သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက် (Marcus et al တစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ဝေနေကြသည်။ , 2001), hypocretin / orexin ဆိပ်ကမ်း၏ဖြန့်ဖြူးကိုက်ညီ။ နှစ်ခု receptors တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အသားအရောင်ခွဲခြားဘို့သက်သေအထောက်အထားမကြာသေးမီကကြွက်များတွင် pharmacological သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (phMRI) ကို အသုံးပြု. ရယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစိတ်ကြွဆေး၏သက်ဝင်သက်ရောက်မှု differential အဆိုပါရွေးချယ် OX2 အဲဒီ receptor ရန် JNJ-1037049 နှင့်အတူပါသို့မဟုတ်ဝတ္ထု OX1 အဲဒီ receptor ရန် GSK1059865 နှင့်အတူ Pre-ကုသမှုအားဖြင့် attenuated ခဲ့ကြသည်: JNJ-1037049 တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ thalamus အတွက်စိတ်ကြွဆေးသက်ရောက်မှု attenuated, arousal တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများ, GSK1059865 စဉ် အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala, BNST နှင့် ventral striatum အတွက် activation လျှော့ချ; စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးဦးနှောက်ဧရိယာများ (Gozzi et al ။ , 2011) ။ အတူတူအမူအကျင့် profile များကိုများတွင်ကွဲပြားမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့မြေပုံတွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှု, ရွေးချယ် OX1 သို့မဟုတ် OX2 ဖြစ်စေ receptors ပစ်မှတ်ထားကြောင်းဝတ္ထုဟော်မုန်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ခံပါတယ်။ သို့သျောလညျးအနေဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းနှင့် arousal အတွက် OX2 အဲဒီ receptor ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိနိုင်စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထား (Gatfield et al ကထောက်ခံနေသည်။ , 2010), အ OX1 အဲဒီ receptor ၏ရွေးချယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ကုထုံးအလားအလာအကဲဖြတ် (Gotter et al အောက်မှာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ , 2012).
အဆိုပါ hypocretin / orexin စနစ်၏ဇီဝဗေဒ၏ပိုကောင်းနားလည်မှုကွဲပြားခြားနားသော selection နှင့်အတူမူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်စီးရီးအတွက်ရရှိလာတဲ့အများအပြားဆေးဝါးကုမ္ပဏီများတွင်မူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအစီအစဉ်များကိုရာထူးတိုးခဲ့ပြီး စသည်တို့အတွက် ဝိသေသလက္ခဏာများ (Faedo et al ။ , 2012; Lebold et al ။ , 2013) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအချို့ဒြပ်ပေါင်းများ OX1- နှင့် OX2-မှီခို neurotransmission စူးစမ်းဖို့ pharmacologic ကိရိယာများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် Vivo အတွက်။ အနည်းငယ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအောင်မြင်စွာလူသားတွေအတွက်တိုးတက်ခဲ့ကြသည်အထူးသဖြင့်အတွင်း dual-OX1-OX2 အဲဒီ receptor ရန် (Dora) almorexant (Hoever et al ။ , 2012), SB-649868 (Bettica et al ။ , 2012), နှင့် suvorexant (Herring et al ။ , 2012) ။ သာ suvorexant အဆင့်3ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆင့်အောင်မြင်စွာ သွား. 2013 အတွက်အိပ်မပျော်အသစ်ကုသမှုအဖြစ် USA တွင်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
OX1 အဲဒီ receptor ရန်အဖြစ်အသုံးပြုပထမ pharmacological tool ကို SB-334867 (ဂျုံးစ် et al ဖြစ်ခဲ့သည်။ , 2001; စမတ် et al ။ , 2001) ။ မကြာသေးမီကအခြားဒြပ်ပေါင်းများကိုအဆိုပြုထားပြီ: GSK1059865 (Alvaro et al ။ 2009; Gozzi et al ။ , 2011), 2,5 di-အစားထိုး piperidines (Jiang et al ။ , 2012) နှင့် ACT-335827 (Steiner et al ။ , 2013).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုငါတို့သည်အများအားဖြင့်အထူးသဖြင့်စွဲလမ်းနှင့်မူးရူးစားစပ်လျဉ်း၌၎င်း, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအတွက် OX1-mediated neurotransmission တစ်ဦးစားပေးအခန်းကဏ္ဍများအတွက်, pharmacologic tools များနှင့်အတူစုဆောင်းအထောက်အထား, ဖြေရှင်း။
မူးယစ်ဆေးစွဲတူသောနှင့် compulsive စားအပြုအမူတွေအတွက် Hypocretin / orexin နှင့် OX1 အဲဒီ receptor
အများအပြားက preclinical တွေ့ရှိချက် compulsive နှင့်ထပ်တလဲလဲအပြုအမူ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် hypocretin / orexin စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုညွှန်ပြ။ မကြာသေးမှီကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (Harris က et al အတွက်သော hypocretin / orexin system ကို indicting ထက်ပိုတရာဆောင်းပါးတွေအတွက်စုဆောင်းအထောက်အထား summaries ။ , 2005) Espana et al (ကြွက်များတွင်ကင်း, စိတ်ကြွဆေး, မော်ဖင်းအကိုက်, ဘိန်းဖြူ, နီကိုတင်း, အီသနောနှင့် cannabinoids မှထိတွေ့မှုနှင့်အတူဆက်စပ်အမူအကျင့်စွဲတူသော dysregulations တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ , 2011; Mahler et al ။ , 2012; Boutrel et al ။ , 2013; Flores et al ။ , 2013), အဖြစ်မူးရူး (Tsujino နှင့် Sakurai အစာစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ၏အလွန်အကျွံစားသုံးမှုအတွက်, 2013).
စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက် hypocretin / orexin ပါဝင်ပတ်သက်မှုပိုင်းတွင်မော်ဖင်းအကိုက်ထံမှဆုတ်ခွာ၏လျော့ချဆိုင်းဘုတ်များဖေါ်ပြခြင်းသည် hypocretin / orexin peptide ၏တရားမဝင်သော mutation (KO) တင်ဆောင်လာသောကြွက်များတွင်ရရှိသောခဲ့သည်ထောက်ပံ့ဖို့ဒေတာ (Georgescu et al ။ , 2003) ။ မော်ဖင်းအကိုက်အဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်, ချို့ယွင်း conditional ရာအရပျ preference ကို (နာရီတာ et al ။ , 2006) နှင့်နီကိုတင်း (ပလာဇာ-Zabala et al ဘို့။ , 2012) ကြွက်များတွင်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ပိုများသောမကြာသေးမီကသည် OX1 အဲဒီ receptor ၏ဖျက်မှုနှင့်အတူ KO ကြွက်များတွင်လေ့လာမှုများလျှော့ချကိုကင်းနှင့်အ cannabinoid Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် abstinence (Holland et al ပြီးနောက်ယူပြီးမူးယစ်ဆေး၏ reinstatement များ၏ပိတ်ဆို့ပြသခဲ့သည်။ , 2012; Flores et al ။ , 2013), မူးယစ်ဆေးရှာ၏ reinstatement ဖြန်ဖြေအတွက် OX1 receptors များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြ။
ကြွက် SB-334867 တစ်ဦးဦးစားပေး OX1 အဲဒီ receptor ရန်အတွက်, အီသနော, နီကိုတင်း, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းထိတွေ့ကြွက်များတွင် sensitive ကမူးယစ်ဆေးရှာကြံအပြုအမူနှင့်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါလျှော့ချ။ ဤရွေ့ကားနှင့်အခြားတွေ့ရှိချက်များကျယ်ပြန့်မကြာသေးမီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ (Mahler et al ခံခဲ့ရသည်။ , 2012; Boutrel et al ။ , 2013) ။ အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွား SB-334867 တသမတ်တည်းစူးရှသောကဖိစီးမှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ, အီသနောအဘို့အစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း, နီကိုတင်း, ကင်း, cannabinoids နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူယခင်ကဆက်စပ်တွေကိုဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏ reinstatement နှင့်အတူဆက်စပ် compulsive အပြုအမူ attenuated သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
မကြာသေးမီကအလွန်ရွေးချယ် OX1 အဲဒီ receptor ရန် GSK1059865 (5-bromo-N ကို - [(2S, 5S) -1- (3-fluoro-2-methoxybenzoyl) -5-methylpiperidin-2-yl] methyl-pyridin-2-Amin ) Alvaro et al ပါ (GSK စုဆောင်းခြင်းအတွင်းသွင်ပြင်လက္ခဏာခံခဲ့ရသည်။ , 2009) ။ 1059865 ၏ဆေးထိုးမှာ GSK25 (အပြည့်အဝကြွက်၏ဦးနှောက်ထဲတွင် OX1 receptors သိမ်းပိုက်ဖို့ခန့်မှန်း) ကီလိုဂရမ် ip သာဆိုနိုင်သည်အားနည်းညှို့အကျိုးသက်ရောက်မှု (Gozzi et al ညွှန်း, ကြွက်များ၏ဇီဝကမ္မအိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် / MG ။ , 2011; Piccoli et al ။ , 2012) နှင့် OX2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (Mieda et al vs. ခြားနားချက်ကိုအတည်ပြု။ , 2011) ။ ပြောင်းပြန် 10 နှင့် 30 မှာ / ကီလိုဂရမ် ip ဆေးများ mg, GSK1059865 သိသိသာသာ Gozzi et al (က conditional ရာအရပျ-preference ကိုပါရာဒိုင်းအတွက်ကင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု antagonized ။ , 2011) ။ ဤရလဒ်သည်မူးယစ်ဆေးရှာကြံပေမယ့်အိပ်စက်ခြင်း inducing မ relapse တားဆီးအတွက်ရွေးချယ် OX1 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏အဆိုပြုအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏။
OX1 receptors လည်းမကြာသေးမီက compulsive စား (Avena နှင့် Bocarsly ၏မူးရူးဖြစ်စဉ်များဖြန်ဖြေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည် 2012), အစ "အစာစွဲ," အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီ (Volkow နှင့်ပညာရှိအကြား ပို. ပို. အဖြစ်များအခြား compulsive အပြုအမူအဖြစ်သတ်မှတ်, 2005; Pedram et al ။ , 2013) ။ ဒါဟာကနဦး orexin-တစ်ဦး၏စူးရှသောဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေး (အချို့အဝက်ကို et al တိကျတဲ့ hypothalamic ဆားကစ်ပေါ်မှာသရုပ်ဆောင်နေဖြင့်အပြုအမူအစာကျွေးမှုကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်းပြသခံခဲ့ရပေမယ့်။ , 2013), hypocretin / orexin-သွေးဆောင်အစားအစာစားသုံးမှုအစားအစာ၏အာခေါင်, စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ, arousal ၏အဆင့်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်အတန်း (Yamanaka et al အပါအဝင်အခြားအချက်များကြောင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ , 2003; Zheng et al ။ , 2007; Choi et al ။ , 2010; Tsujino နှင့် Sakurai, 2013) ။ ဒါက hypocretin / orexin system ကိုအစားအစာစားသုံးမှု (Mahler et al ၏တစ်ဦးတည်းသောတိုးထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးအပြုအမူပုံစံများကိုသက်ဝင်နိုင်သောအကြံပြုထားသည်။ , 2012) ။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ, အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (စမစ်နှင့် Robbins ၏ compulsive စားသုံးမှုအတွက် hypocretin / orexin dysregulation တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှပါဝင်ပတ်သက်မှုညွှန်ပြ 2013).
compulsive စား, ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကျော်အစားအစာကန့်သတ်ကာလနှင့်အတူအရေးပါတယ်လို့အစားအစာပမာဏကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာသည့်အခါမူးရူးဖြစ်စဉ်များထုတ်လုပ်နိုင်မယ့်တိကျတဲ့နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုခွအေနအေအစားအသောက်ပုံမှန်ရရှိမှု၏ကာလကိုပြောင်းသဖြင့်ကြွက်များတွင်ထွက်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါမော်ဒယ် pharmacologically အဆိုပါ compulsive အစားအစာစားသုံးမှု (Cifani et al အပေါ် topiramate တစ်ခု inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်း, ကြွက်များတွင်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ , 2009) လူ့မူးရူးစား (McElroy et al အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းနှင့်ဆင်တူ။ , 2003) ။ မူးရူးစား၏ဤစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက် hypocretin / orexin လမ်းကြောင်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာကိုမရရှိနိုင်ကြပေမဲ့ကျနော်တို့ OX1059865 receptors (Piccoli et al ၏ဆက်စပ်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန် tool အဖြစ် GSK1 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ , 2012) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ 1059865 နှင့် 10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၏ဆေးများမှာ GSK30, ကဖြစ်ပေါ်သည့်အခါသဘာဝအဆုလာဘ်အပေါ် OX1 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အသေးစားအကျိုးသက်ရောက်မှုအတည်ပြု, (သိသိအစားအစာကန့်သတ်ထိတွေ့မဟုတ်) ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုတားစီးမတတျနိုငျ ဇီဝကမ္မအခြေအနေများအောက်တွင်။ ဆန့်ကျင်တွင်, GSK1059865 အစွမ်းထက် Piccoli et al (နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု / အစားအစာကန့်သတ်ထိတွေ့ကြွက်များတွင် compulsive စားအပြုအမူ inhibited ။ , 2012) ။ စိတ်ဝင်စားစရာပုံမှန်အစားအစာစားသုံးမှုကိုလည်း (ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များတွင်မျိုးဗီဇအဝလွန်ခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့သော်လည်းမကြွက်များအတွင်း OX1 ရန် SB-334867 အားဖြင့်အဖြူရောင် et al inhibited ခံခဲ့ရသည်။ , 2005) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမှဆက်စပ်တဏှာအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အလွန်အကျွံ drive ကို attenuating အတွက် OX1 အဲဒီ receptor-mediated ဂီယာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမူးရူးစားလည်း Dora SB-649868 အားဖြင့် inhibited, ဒါပေမယ့်မရွေးချယ် OX2 အဲဒီ receptor ရန် JNJ-10397049 အသုံးပြုပုံ SB-649868 ၏သက်ရောက်မှု Piccoli et al (ဖြစ်ကောင်းလုပ်ဆောင်ချက်က၎င်း၏ယန္တရား၏ OX1 အစိတ်အပိုင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း။ အကြံပြုခဲ့သည် , 2012) ။ Intriguingly သာစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် almorexant ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းအစားအစာကန့်သတ်များ၏ပြောင်းကာလ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (Funabashi et al ၏ compulsive စားမြှင့်တင်ရန်အတွက် hypocretin / orexin စနစ်၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်အရေးပါကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ , 2009; Pankevich et al ။ , 2010) ။ ဤသည်လေ့လာရေးဒီပါရာဒိုင်းအတွက် Dora နှင့် OX1 ရန် anti-စိတ်ဖိစီးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကနေတဆင့်အဓိကအားအလုပ်မဖြစ်ဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤသည်စွမ်းအင်ဟန်ချက်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်တိုက်ရိုက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်၏အပြောင်းအလဲများနှင့် endocrine အချက်ပြမှုများ (Tsujino နှင့် Sakurai, တုံ့ပြန်ရန် hypocretin / orexin အာရုံခံ၏ sensitivity ကိုအတွက် hypocretin / orexin ၏ရှုပ်ထွေးသောအခန်းကဏ္ဍပေးထား, အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး 2013).
ယေဘုယျအား GSK1059865 နှင့်အတူရရှိသောရလဒ်များသည်ရွေးချယ် OX1 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းတိုက်ရိုက် hedonic စားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အကျိုးကိုလမ်းကြောင်းထိခိုက်ပေမယ့်အစားအစားအစာစားသုံးမှု၏ compulsive ရှုထောင့်တစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့, ဖြစ်ကောင်းပုံမှန်မဟုတ်သောစား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဇွဲများအတွက်အကောင့်သောသူတို့ကိုမပေးကြောင်းအတည်ပြု bulimic လူနာဖြစ်နိုင်သည်မူးရူးစားအတွက်အပြုအမူတွေနဲ့, ။ ထို့အပြင်ဤဒေတာကိုယခုအချိန်အထိအများအားဖြင့် SB-1 (ဟေး et al အပေါ်အခြေခံပြီး, re-အကဲဖြတ်ရန်အတွက် putative OX334867 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းပရိုဖိုင်းကိုရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ , 2000), အဘယ်သူ၏ selection မြင့်သောဆေးထိုးခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ရေးမှာဆွေးနွေးမှု (Holland et al အောက်မှာပါပြီတဲ့ဒြပ်ပေါင်း။ , 2012; McElhinny et al ။ , 2012).
လူ့ biomarker လေ့လာမှုများ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ကခြိနျးတှေ့ဖို့စွဲရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောအမူအကျင့် dysregulation အတွက် hypocretin / orexin စနစ်တစ်အခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့, သူတို့အဘယ်သူအားမျှ pharmacologic အေးဂျင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သွေးထဲတွင် hypocretin / orexin အဆင့်ဆင့်၏အပြောင်းအလဲများဒုက္ခဆင်းရဲရမှတ် (ဗွန် der Goltz et al နှင့်အတူအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့ဖေါ်ပြခြင်း, အရက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကအရက်သမားအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ , 2011), အနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့ abstinent ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်တဏှာရမှတ် (ဗွန် der Goltze et al နှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်နေစဉ်။ , 2010) ။ hypocretin / orexin အဆင့်ဆင့်၏တိုးလာစကားရပ်ကိုလည်းစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားပြုသူများ (Rotter et al များ၏အတွက်အရံသွေးထဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ , 2012) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏အနက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, narcolepsy ကြောင့်ထိခိုက်ဘာသာရပ်များပိုမိုသိရှိလိုပါကရလဒ်များကိုရရန်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူ addiction သူတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုအဘို့ကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် narcolepsy လေ့ Peyron et al (ထို hypocretin / orexin မျိုးရိုးဗီဇအတွက်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ , 1998), hypocretin / orexin KO ကြွက်များတွင်ရရှိသောကြောင့်ဆင်တူသည့် peptide တစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေချို့တဲ့အတွက်ရရှိလာတဲ့။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူအတွက်သိမ်မွေ့ကွဲပြားခြားနားမှု narcoleptic ဘာသာရပ်များအစီရင်ခံပေမယ့်ဒီလူနာတွေကိုအတွက်ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီး၏ပျံ့နှံ့မှုပုံမှန်လူဦးရေ (Bayard နှင့် Dauvilliers ၏ထံမှကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့ကြ၏ 2013) ။ ပြန်လည်သုံးသပ် Mahler et al တွေ့မြင်ဘို့ရှိပါတယ်ရလဒ်များကို (hypocretin / orexin KO ကြွက်တွေမှာစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးလျော့ချသက်ရောက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူကှဲလှဲမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ , 2012; Boutrel et al ။ , 2013) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ narcoleptic ဘာသာရပ်များ, (အိပ်လျှော့ချရန်နှင့် arousal တိုးမြှင့်ဖို့ Self-ဆေးဝါးအဖြစ် Ebben နှင့် Krieger စီးကရက်ဆေးလိပ်နှင့်အနီကိုတင်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများသုံးပြီးကြေညာ 2012) ။ စုစုပေါင်း, တွေ့ရှိချက်များကိုအပိုဆောင်းပိုမိုအာရုံစိုက် Translational လေ့လာမှုများ၏လိုအပ်မှုကိုထောက်ပံ့လူသားများအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့အလုပ်မဖြစ် hypocretin / orexin စနစ်အကြားရှိဆက်ဆံရေးအတွက်ရှုပ်ထွေးဖော်ပြသည်။
စိုးရိမ်စိတ်အတွက် Hypocretin / orexin နှင့် OX1 အဲဒီ receptor
ဇီဝြဖစ်စဉ်ဖတ်စာအုပ်များတစ်ခုအံ့ဆဲဆဲခြိမ်းခြောက်မှု (Hess နှင့် Akert တုံ့ပြန်မှာ "စစ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်-လေယာဉ်ခရီးစဉ်" တုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသော limbic ဆားကစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် hypothalamus ၏ posterior နှင့် perifornical ဒေသများဖော်ပြရန် 1955) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း hypocretin / oirexin ထုတ်လုပ်ကြောင်းအာရုံခံအဆိုပါ perifornical ဒေသ (Peyron et al တွင်တည်ရှိပါသည်။ , 1998) နှင့်စီမံကိန်းအားကွောကျရှံ့ခွငျး, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကဆားကစ် (ရှင်နှင့် Liberzon မှာပါဝင်နေတဲ့ limbic ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အများစုရန်, 2009), ဂျွန်ဆင် et al (နိုးနိုးကွားကွားနှင့် arousal သာထိန်းချုပ်ထားအတွက် hypocretin / orexin တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, ဒါပေမယ့်လည်းမကြောက်ရွံ့ဘဲ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု။ , 2012a; Sears et al ။ , 2013).
ဒါဟာအယူအဆနှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကဆောင်းပါးများနှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုအတွက်အကျဉ်းချုပ် (Bisetti et al ခံခဲ့ရသည်။ , 2006; Mathew et al ။ , 2008; ဂျွန်ဆင် et al ။ , 2010, 2012a) ။ ဤအပံ့ပိုးမှုများကိုစိတ်ဝင်စားစာဖတ်သူများအကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ orchestrating အတွက် hypocretin / orexin အာရုံခံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထောက်ခံအားပေးသက်သေအထောက်အထားများ, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိတ်လန့်-inducing လှုံ့ဆော်မှုမှနှလုံးသွေးကြောများနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ပြုပြင်အယူအဆစိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှု (သို့မဟုတ် anxiogenic ပြုပြီမြင့်မား endogenous အဆင့်ဆင့်) အလှည့်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိကြောင်းဦးနှောက် limbic ဒေသများတွင်တည်ရှိသောသူတို့ရဲ့ terminal ကိုနယ်ပယ်များတွင်ပိုပြီး hypocretin / orexin လှတျမညျသော hypocretin / orexin အာရုံခံအပေါ်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်မယ်လို့ဆိုလို ။ ထိုအခါ hypocretin / orexin •အ, endocrine နှင့်စိုးရိမ်သောကများပုံမှန်အမူအကျင့်ဖြစ်စဉ်များလည်းပါဝင်သည်နှင့်ပြည်နယ်များစိုးရိမ်ထိတ်လန်ရာ arousal တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအဆင့်အထိ, ဆီသို့ကွောကျရှံ့ခွငျး, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကဆားကစ်၏ activation များ၏အဆင့်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ hypocretin / orexin အလွန်အကျွံလွှတ်ပေးရေးတစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောဇွဲစိုးရိမ်စိတ်များအတွက်အလားအလာအရေးပါ pathophysiological အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းမြင့်မား arousal နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်အဖြစ် predisposed တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထိတ်လန့်ဖြစ်စဉ်များသို့ပြန်သွားကြသည်ဖို့တာဝန်ယူမှုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။
လူသားတွေအတွက်ဒေတာကို microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး (Blouin et al နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဝက်ရူးပြန်ရောဂါခံစားနေရပြီးဘာသာရပ်များ၏ amygdala အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်မောင်းနှင် extracellular hypocretin / orexin တစ်ခုတိုးလာလွှတ်ပေးရန်ပြသခဲ့သည်။ , 2013) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာ hypocretin / orexin ၏အဆင့်ဆင့်ပါတီအားစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းစဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွားပေမယ့်အမြင့်ဆုံးထိပ်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကို valence ၏စူးရှသောစိတ်ခံစားမှုတက်ကြွနေစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ amygdala ရောဂါဗေဒစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်သော salience နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု processing များအတွက် key ကိုဖွဲ့စည်းပုံ, စဉ်းစားသည်။ အဆိုပါ amygdala သို့ hypocretin / orexin ၏ကြွက် microinjection ခုနှစ်တွင် Avolio et al (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးပွါး။ , 2011) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ hypocretin / orexin ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင့်မားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှ hyperactivity ပြည်နယ် (ဂျွန်ဆင် et al အကြံပြုခြင်း, ထိတ်လန့်ပူပန် Disorders နှင့်အတူလူနာများ၏ cerebro-ကျောရိုးအရည် (CSF) တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ , 2010) ။ အခြားလေ့လာမှုမှာ hypocretin / orexin ၏အဆင့်ဆင့် Zhu et al (hypercapnia, acidosis နှင့်ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု 10-ခြံတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့အခွအေနေ, နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ (COPD) နဲ့ဘာသာရပ်များ၏အရံသွေးထဲမှာတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ , တိုးမြှင့် 2011).
ဆုံတွေ့ရှိချက် hypocretin / orexin ၏ anxiogenic ဂုဏ်သတ္တိများအဓိကအား OX1 receptors ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကကမကထပြုခဲ့ကြသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုထိုကဲ့သို့သော SB-1 အဖြစ် OX334867 အဲဒီ receptor ရန်, (ဂျွန်ဆင် et al နှင့်အတူ Pre-ကုသခွငျးအားဖွငျ့ attenuated ခံခဲ့ရသည်။ , 2010, 2012b), GSK 1034865 (Gozzi et al ။ , 2011) နှင့် ACT-335827 (Steiner et al ။ , 2013), သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော almorexant (Steiner et al ကဲ့သို့သော Dora, အတူ။ , 2012) ။ စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှု၏သိသာထင်ရှားသောကို attenuation ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက် (Sears et al အပါအဝင် Paradigm အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ , 2013; Steiner et al ။ , 2013), panicogenic နို့တိုက်ပြုတ်ရည် (ဂျွန်ဆင် et al ။ , 2010), hypercapnia (Li က et al ။ , 2010; ဂျွန်ဆင် et al ။ , 2012b), အပြည်ပြည်သွား-7142 (ဂျွန်ဆင် et al ၏အုပ်ချုပ်မှု။ , 2012a), မြင့်သောဆေးထိုးနီကိုတင်း (ပလာဇာ-Zabala et al ။ , 2010), နှင့် yohimbine (Richards et al ။ , 2008) ။ OX1 နှင့် OX2 KO ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးမကြာသေးမီကအထောက်အထားများအ cued ကွောကျမကျအေးစက်သင်ယူမှုနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုမှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (Sears et al ဖြန်ဖြေအတွက် locus coeruleus တည်ရှိသော OX1 receptors ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုပြသခဲ့သည်။ , 2013; Soya et al ။ , 2013).
hypocretin / orexin ပါဝင်သောအာရုံခံ CRF ကြွယ်ဦးနှောက်ဒေသများအခြားအချက်တစ်ချက်လွှတ်သည့် anxiogenic peptide corticotropin (CRF) ထုတ်လုပ်အာရုံခံနှင့် hypocretin / orexin အာရုံခံစီမံကိန်းများမှသွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားနှစ်ခု peptidergic စနစ်များကိုထိန်းချုပ်မှုအတွက် function အချင်းချင်းညိတွယ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြု စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု (Ida et al ၏။ , 2000; Pañeda et al ။ , 2005) ။ သို့သော်ဤအယူအဆ, CRF-1 ရန် (Zorrilla နှင့် Koob ၏ anxiolytic ဂုဏ်သတ္တိများမှန်ကန်လျှင် 2004) နှင့် OX1 ရန်သူတို့အလားတူ profile များကိုဖေါ်ပြခြင်း, ထပ်လိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကြွက်များတွင် phMRI သုံးပြီးမကြာသေးခင်လေ့လာမှုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် CRF-1 နှင့် OX1 များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု function အသားအရောင်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာ phMRI activation ဦးနှောက်မြေပုံကို anxiogenic သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်လူသိများဆေးများမှာ yohimbine နှင့်အတူကြွက်များတွင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ က CP-154,526 တစ်ဦးရွေးချယ် CRF-1 ရန်ဖြစ်စေနှင့်အတူ pre-ကုသမှု (Seymour et al ။ , 2003), ဒါမှမဟုတ်ရွေးချယ် OX1 အဲဒီ receptor ရန် GSK1059865 (Gozzi et al ။ , 2011) ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ yohimbine activation ဦးနှောက်မြေပုံမော်တာ, cingulate, retrosplenial, dorsal prefrontal cortex, အ caudate-putamen ၏ dorsal ဝေမျှလျက်, amygdala ၌က CP-154,526 အားဖြင့် attenuated ခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနား, GSK1059865 Gozzi et al (ထို yohimbine activation နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်မြေပုံ septum, dorsal thalamus, amygdala, ventral hippocampus, orbitofrontal, prefrontal, နောက်ကျနေခဲ့သည်, cingulate retrosplenial နှင့် Piriform cortex attenuated ။ , 2013) ။ ယေဘုယျအား, ထို OX1 အဲဒီ receptor ရန်အတွက် dopaminergic mesolimbic စနစ်၏တိုင်းဒေသကြီးများ၏လှုပ်ရှားမှုများ attenuating, အ CRF1 ရန်ထက်ကြောက်ရွံ့သောသဘော, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက circuit ကိုအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုကျယ်ပြန့်အကျိုးသက်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ အဆုံးစွန်သောလေ့လာရေးနှင့်အညီတစ်ဦး dissociation စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကိုကင်း (ဝမ် et al အတွက်ကြွက် mesolimbic dopamine system ပေါ်တွင် OX1 နှင့် CRF-1 ရန်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ , 2009) နှင့် (ပလာဇာ-Zabala et al ရှာကြံနီကိုတင်း။ , 2012).
စိတ်ဝင်စားစရာတချို့လေ့လာမှုတွေအတွက် OX1 ရန်နှင့် Dora နှစ်ဦးစလုံးတိကျတဲ့အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှု (ဥပမာ, အမွငျ့မားသောပေါင်းဝင်္) (Steiner et al အတွက် anxiolytic သက်ရောက်မှုမပြခဲ့ပါဘူး။ , 2012; ရော့ဂျာ et al ။ , 2013) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ hypocretin / orexin အဲဒီ receptor ရန်ကြွက်များတွင် Basal စိုးရိမ်စိတ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပေမယ့်စိုးရိမ်စိတ်အဆင့်ဆင့်ယာယီထိုကဲ့သို့သော acidosis / hypercapnia အဖြစ်အစွမ်းထက်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အခါ anxiolytic ကဲ့သို့ဂုဏ်သတ္တိများကွိုးစားအားထုကြဘူးသောအယူအဆနှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။
ထိုကဲ့သို့သောတော့ပူပန် Disorders အဖြစ်အခြေအနေများအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှပစ်မှတ်အဖြစ် OX1 receptors, မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့် Bing စားပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်စဉ်းစားများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်။ လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားပေါ်ရှိလက်ရှိအသိပညာအပေါ်အခြေခံပြီး, OX1 အဲဒီ receptor ရန် Dora ထက်နည်းပါးလာဖှံ့ဖွိုးတိုးတအန္တရာယ်များရှိသင့်ပါတယ်။ Scammell နှင့် Winrow အားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြသည့်အတိုင်း (2011) နှင့် Boutrel et al ။ (2013) Dora အဘို့, နှစ်ဦးစလုံး hypocretin / orexin receptors ၏နာတာရှည်တစ်ပြိုင်နက်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအလားအလာနိုင်ပါတယ်: (1) catalepsy အပါအဝင် narcoleptic ကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ, သွေးဆောင်; (2) ရည်မှန်းချက် oriented ဆုံးဖြတ်ချက်ချအယှက်; (3) အကြိုးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်အပျော်အပါးကိုလျှော့ချ; (4) သက်သာခြင်း, အိပ်ခြင်းနှင့်စူးရှသောအရေးပေါ်သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာတုံ့ပြန်မှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချို့ယွင်းသွေးဆောင်; တိုးမြှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူ Basal ဇီဝြဖစ်ပေါ် (5) သက်ရောက်မှု။ သို့သော်ဤမျှဝေး Dora suvorexant နှင့်အတူလူ့အတွေ့အကြုံ, SB-649868 နှင့် almorexant ပုအတွင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အခါအထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များနှင့် narcoleptic eoisodes သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချစွမ်းဆောင်ရည်၏ချွတ်ယွင်း၏အထူးသဖြင့်အဘယ်သူမျှသော induction ၏အနည်းဆုံးဖြစ်ပျက်မှုဖေါ်ပြခြင်းအလွန်အားတက်စရာဖြစ်ပါသည် ထိုးအကွာအဝေးလက်ရှိအဆိုပြုထား။ သို့သော်ပိုကြီးတဲ့လူဦးရေနှင့်အဆင့်မြင့်ဆေးများပိုမိုဒေတာနောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။
သာ OX1 အဲဒီ receptor အဓိကအားဒီအဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးနှောင့်အယှက်မျိုးဗီဇ mutation (ဝူ et al တင်ဆောင်လာသောခွေးသရုပ်ပြခဲ့သော narcolepsy နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကတည်းကစိတ်ဝင်စားစရာကုသရွေးချယ် OX2 ရန် Dora ၏တူညီသောအန္တရာယ်များကိုမျှဝေဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်မဟုတ်အတူ။ , 2011) ။ တစ်ဦး OX1 ရန်၏နောက်ထပ်အလားအလာရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည်: (1) benzodiazepines, serotonin-လွှာမှ inhibitors နှင့် CRF-1 ရန်ကနေခွဲခြားသော preclinical anxiolytic ပရိုဖိုင်း; (2) ဤသို့သောထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုများသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေနဲ့အတူစူးရှခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်သောကဖြစ်စဉ်များမှဆက်စပ် Hyper-arousal ပြည်နယ်များလျှော့ချများ၏စွမ်းရည်; (3) sensitive ကစိတ်ဖိစီးမှု-စိတ်သက်သာရာ, ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာနဲ့ဆက်စပ် compulsive နှင့်ထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေ၏ကို attenuation; (4) သဘာဝဆုလာဘ်၏အလိုဆန္ဒအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းနှင့် (5) အိပ်ပျော်ခြင်း-inducing သက်ရောက်မှုမရှိခြင်း။
ဤရွေ့ကားထည့်သွင်းစဉ်းစားမှသာမကြာသေးမီကရွေးချယ်ဒြပ်ပေါင်းများ၏မျိုးဆက်သစ်နှင့်အတူပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်, preclinical လေ့လာမှုများ၏ကန့်သတ် Datasets အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ နာတာရှည်ထိုးလေ့လာမှုများပျောက်ဆုံးထို့ကြောင့်ရေရှည်အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များသတင်းအချက်အလက်နေကြသည်မရရှိသေးမရှိကြပေ။ ထို့အပြင်မရှိရွေးချယ် OX1 အဲဒီ receptor ရန်ယခုအချိန်အထိလူသားများတွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်အတားအဆီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူများ၏မော်ဂျူအတွက်အလားအလာကုထုံးအလားအလာနောက်ထပ်အခြေခံသုတေသနကိုနှိုးဆွနေသည်နှင့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီကြီးများ၏တက်ကြွစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Emilio Merlo Pich အက်ဖ်ဟော့ဖ်မန်း-La Roche ၏အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားစာရေးဆရာသုတေသနအကျိုးစီးပွားအလားအလာပဋိပက္ခအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ဆိုစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးဆက်ဆံရေး၏မရှိခြင်းအတွက်ကောက်ယူခဲ့ကွောငျးမိန့်တော်မူ၏။
Alvaro G. အ, Amantini ဃ, ရှတာဇီ L. (2009) ။ Orexin Related Disorders ဆက်ဆံရန်အသုံးပြု Pyridine အနကျအဓိပ်ပါယျ။ 2009124956 wo ။ ရာခိုင်နှုန်း Int ။ Apple က။
Avena မိုင်, Bocarsly ME (2012) ။ မမှန်စားဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များ Dysregulation: မူးရူးစား, bulimia nervosa နှင့် anorexia nervosa ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည် neurochemical သတင်းအချက်အလက်။ Neuropharmacology 63, 87-96 10.1016 / j.neuropharm.2011.11.010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Avolio အီး, အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် R. , Carelli အေ, Canonaco အမ် (2011) ။ Amygdalar orexinergic-GABAergic interaction ကဆီးရီးယားရွှေကြွက်များ၏စိုးရိမ်ပူပန်အပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 218, 288-295 10.1016 / j.bbr.2010.11.014 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bayard အက်စ်, Dauvilliers YA (2013) ။ narcolepsy-cataplexy နှင့်အတူလူ့အတွက်ဆုလာဘ်-based အပြုအမူတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 7: 50 10.3389 / fnbeh.2013.00050 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bettica P. , Squassante L. , Zamuner အက်စ်, Nucci G. အ, Danker-Hopfe ဃ, Ratti အီး (2012) ။ အဆိုပါ orexin ရန် SB-649868 အားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်မူလတန်းအိပ်မပျော်နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်အိပ်စက်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်။ အိပ်စက်ခြင်း 35, 1097-1104 10.5665 / sleep.1996 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bisetti အေ, Cvetkovic V. , Serafin အမ်, Bayer L. , Machard ဃ, ဂျုံးစ် BE, et al ။ (2006) ။ ဗဟို medial amygdala ၏အာရုံခံအပေါ် hypocretin / orexin ၏ Excitatory အရေးယူ။ neuroscience 142, 999-1004 10.1016 / j.neuroscience.2006.07.018 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Blouin လေး, Fried ဗြဲ, Wilson က CL, Staba RJ, Behnke EJ, Lam HA, et al ။ (2013) ။ လူ့ hypocretin နှင့် melanin-အာရုံဟော်မုန်းပမာဏစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေကြသည်။ နတ်။ Community ။ 4, 1547-1553 10.1038 / ncomms2461 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Boutrel ခ, Steiner N. , Halfon O. (2013) ။ အဆိုပါ hypocretins နှင့်အကျိုးကို function ကို: အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်ယခုအချိန်အထိသင်ယူကြသနည်း တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 7: 59 10.3389 / fnbeh.2013.00059 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Choi DL, Davis က JF, Fitzgerald ME, Benoit SC (2010) ။ အစားအစာကိုလှုံ့ဆျောမှု, ဆုလာဘ်-based နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူများနှင့်ကြွက်များအတွက်အစားအစာ-သွေးဆောင်အာရုံခံ activation အတွက် orexin-တစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience 167, 11-20 10.1016 / j.neuroscience.2010.02.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cifani C. , Polidori C. , Melotto အက်စ်, Ciccocioppo R. , Massi အမ် (2009) ။ sibutramine, fluoxetine, topiramate နှင့် midazolam ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: မူးရူး၏တစ်ဦးက preclinical မော်ဒယ်ဒုတိယတန်း Diet နှင့်အစားအစာမှစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းအစာစားခြင်း။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 204, 113-125 10.1007 / s00213-008-1442-y က [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Lecea L. , Kilduff TS, Peyron C. , Gao xB, Foye PE, Danielson PE, က de ။ (1998) ။ အဆိုပါ hypocretins: neuroexcitatory လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ hypothalamus-တိကျတဲ့ peptides ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 95, 322-327 10.1073 / pnas.95.1.322 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ebben MR, Krieger AC အ (2012) ။ နီကိုတင်း၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင် cataplexy နှင့်အတူ Narcolepsy ။ ဂျေ Clin ။ အိပ်စက်ခြင်း Med ။ 8, 195-196 10.5664 / jcsm.1780 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ekholm ME, Johannson L. , Kukkonen JP (2007) ။ Ca3 + ရောက်လာခြင်းနှင့် ERK မှ OX1 orexin / hypocretin အဲဒီ receptor ၏ IP2 လွတ်လပ်သောအချက်ပြ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Biophys ။ res ။ Community ။ 353, 475-480 10.1016 / j.bbrc.2006.12.045 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Espana RA, Melchior JR, ရောဘတ်, DC, ဂျုံးစ် SR (2011) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Hypocretin 1 / orexin တစ်ဦးကင်းမှ dopamine တုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 214, 415-426 10.1007 / s00213-010-2048-8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Faedo အက်စ်, Perdonàအီး, Antolini အမ်, di Fabio R. , Merlo Pich အီး, Corsi အမ် (2012) ။ functional နှင့် kinetic လေ့လာမှုများ binding နွားကို 1 နှင့် OX2 orexin အဲဒီ receptor ရန်ခြားနားပါစေ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 692, 1-9 10.1016 / j.ejphar.2012.07.007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Flores အေ, Maldonado R. , Berrendero အက်ဖ် (2013) ။ cannabinoid ဆုလာဘ် modulate တစ်ဝတ္ထုပစ်မှတ်အဖြစ် hypocretin / orexin အဲဒီ receptor-1 ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 3223, 590-598 10.1016 / j.biopsych.2013.06.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အချို့အဝက်ကို HC, Wu အမ်ရှိမုန် JJ, Herzog ဒဗလျူ (2013) ။ မမှန်စား Neurocircuit function ကို။ int ။ ဂျေစားပါ။ disorders ။ 46, 425-432 10.1002 / eat.22099 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Funabashi တီ, Hagiwara အိပ်ချ်, Mogi K. , Mitsushima ဃ, Shinohara K. , Kimura အက်ဖ် (2009) ။ အစာရှောင်ခြင်းဖို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူအတွက် orexin အာရုံခံများ၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ neuroscience ။ လက်တ။ 463, 31-34 10.1016 / j.neulet.2009.07.035 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gatfield ဂျေ, Brisbare-Roche C. , Jenck အက်ဖ်, သူဌေးက C. (2010) ။ Orexin အဲဒီ receptor ရန်: CNS မမှန်အတွက်အသစ်တခုအယူအဆ? ChemMedChem 5, 1197-1214 10.1002 / cmdc.201000132 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Georgescu ဃ, Zachary V. , Barrot အမ်, Mieda အမ်, ဝီလီ JT, Eisch AJ (2003) ။ မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနှင့် with- drawal အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic peptide orexin ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 23, 3106-3111 10.1002 / micr.10128 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gotter AL, Roecker AJ, Hargreaves R. , Coleman PJ, Winrow CJ, Renger JJ (2012) ။ ကုထုံးမူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်အဖြစ် Orexin receptors ။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 198, 163-188 10.1016 / B978-0-444-59489-1.00010-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gozzi အေ, Lepore အက်စ်, Vicentini အီး, Merlo-Pich အီး, Bifone အေ (2013) ။ စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပေါ်မှာ orexin-1 နှင့် CRF-1 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ differential အကျိုးသက်ရောက်မှု: အ pharmacological ဖိအား yohimbine အတူကြွက်တစ် fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology 38, 2120-2130 10.1038 / npp.2013.109 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gozzi အေ, Turrini G. အ, Piccoli L. , Massagrande အမ်, Amantini ဃ, Antolini အမ်, et al ။ (2011) ။ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် orexin-1 နှင့် orexin-2 အဲဒီ receptor ရန်များ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောအလွှာဖော်ပြသည်။ PLoS ONE 6: e16406 10.1371 / journal.pone.0016406 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Harris က GC, Wimmer အမ်, Aston-Jones ဟာဂျီ (2005) ။ ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝတရား 437, 556-559 10.1038 / nature04071 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဟေး AC အဂျက်ဆင်ခ, ချပ်မန်းအိပ်ချ်, Tadayyon အမ်, Johns အေ, Porter RA, et al ။ (2000) ။ တစ်ဦးကရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ စည်းမျဉ်းများ။ Pept ။ 96, 45-51 10.1016 / S0167-0115 (00) 00199-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ချက်ကိုဟိုင်နိုနင်သင်္ဘော MV, Purhonon AK, Makela Ka, Herzig KH (2008) ။ အရံတစ်သျှူးအတွင်း orexin ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ Acta Physiol ။ (Oxf ။ ) 192, 471-485 10.1111 / j.1748-1716.2008.01836.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Herring WJ, Snyder အီး, Budd K. , Hutzelmann ဂျေ, Snavely ဃ, လျူ K. , et al ။ (2012) ။ အိပ်မပျော်ကုသမှုအတွက် Orexin အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း: suvorexant တစ်ကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်။ အာရုံကြော 79, 2265-2274 10.1212 / WNL.0b013e31827688ee [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဟက် WR, Akert K. (1955) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ယန္တရားထဲမှာ hypothalamus ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်စမ်းသပ်ဒေတာ။ AMA Arch ။ Neurol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 73, 127-129 10.1001 / archneurpsyc.1955.02330080005003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hoever P. , Dorffner G. အ, ဂိအိပ်ချ်, Penzel တီ, et al Danker-Hopfe အိပ်ချ်, Barbanoj MJ ။ (2012) ။ Orexin အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအသစ်တစ်ခုအိပ်ပျော်ခြင်း-enable ပါရာဒိုင်း: တစ်အထောက်အထား-of concept ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်။ Clin ။ Pharmacol ။ Ther ။ 91, 975-985 10.1038 / clpt.2011.370 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Holland ဂျာ Pham ဃ, မုဆိုး, CD, Kenny PJ (2012) ။ pharmacological နှင့်အမူအကျင့်မျိုးဗီဇသက်သေအထောက်အထား: Hypocretin-1 receptors ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်-တိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုကိုထိန်းညှိ။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 6: 47 10.3389 / fnbeh.2012.00047 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ida တီ, Nakahara K. , Murakami တီ, Hanada R. , Nakazato အမ်, Murakami N. (2000) ။ ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် orexin ၏ဖြစ်နိုင်သောပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Biophys ။ res ။ Community ။ 270, 318-323 10.1006 / bbrc.2000.2412 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Jiang R. , သီချင်း X တို့မှာ, ဘာလီ P. , Smith ကအေ, Bayona CR, Lin ကအယ်လ်။ (2012) ။ အစွမ်းထက် orexin (hypocretin) အဲဒီ receptor ရန်အဖြစ် Disubstituted piperidines ။ Bioorg ။ Med ။ Chem ။ လက်တ။ 12, 3890-3894 10.1016 / j.bmcl.2012.04.122 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျွန်ဆင် PL, Molosh အေ, Fitz SD, Truitt WA, Shekhar အေ (2012a) ။ Orexin, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက / ထိတ်လန့်ပြည်နယ်များ။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 198, 133-161 10.1016 / B978-0-444-59489-1.00009-4 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျွန်ဆင် PL, မြူဘီစီ, Fitz SD, Federici LM, Hammes N. , အစောပိုင်း MC, et al ။ (2012b) ။ Orexin 1 receptors ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ထိတ်လန့်ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကို modulate တစ်ဝတ္ထုပစ်မှတ်ဖြစ်ကြသည်။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 107, 733-742 10.1016 / j.physbeh.2012.04.016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျွန်ဆင် PL, Truitt ဒဗလျူ, Fitz SD, Minick PE, Dietrich အေ, Sanghani အက်စ်, et al ။ (2010) ။ ထိတ်လန့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက် orexin များအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍ။ နတ်။ Med ။ 16, 111-115 10.1038 / nm.2075 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျုံးစ် DNC, Gartlon ဂျေ, က Parker အက်ဖ်, တေလာစင်ကာပူဒေါ်လာ, Routledge C. , Hemmati P. , et al ။ (2001) ။ ဗဟိုအုပ်ချုပ် orexin-B နဲ့ orexin-တစ်ဦး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ: orexin-B-သွေးဆောင် hyperactivity အတွက် orexin-1 receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology 153, 210-218 10.1007 / s002130000551 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lebold TP, Bonaventure P. , Shireman BT (2013) ။ ရွေးချယ် orexin အဲဒီ receptor ရန်။ Bioorg ။ Med ။ Chem ။ လက်တ။ 223, 4761-4769 10.1016 / j.bmcl.2013.06.057 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လီ Y. လီအက်စ်, ဝေ C. , ဝမ်အိပ်ချ်, Sui ကို N. , Kirouac GJ (2010) ။ အဆိုပါ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် Orexins ကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေ။ Psychopharmacology 212, 251-265 10.1007 / s00213-010-1948-y က [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lund PE, Sariatmadari R. , Uustare အေ, Detheux အမ်, Parmentier အမ်, Kukkonen JP (2000) ။ အဆိုပါ orexin OX1 အဲဒီ receptor CJ Biol phospholypase မှနားဆက်မှီရာတွင်များအတွက်လိုအပ်သောတစ်ဝတ္ထု CA2 + ရောက်လာလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်။ Chem ။ 275, 30806-30812 10.1074 / jbc.M002603200 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mahler SV, Smith က RJ, Moorman DE, Sartor GC, Aston-Jones ဟာဂျီ (2012) ။ စွဲလမ်းအတွက် orexin / hypocretin များအတွက်အကွိမျမြားစှာအခန်းကဏ္ဍ။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 198, 79-121 10.1016 / B978-0-444-59489-1.00007-0 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Marcus ဖြစ်မှု, Aschkenasi CJ, Lee ကအီး, Chemelli RM, Saper သမဝါယမ, Yanagisawa အမ်, et al ။ (2001) ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin receptors 1 နှင့်2၏ differential စကားရပ်။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 435, 6-25 10.1002 / cne.1190 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mathew SJ, စျေး RB, Charney DS (2008) ။ စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်များ၏ neurobiology တွင်လတ်တလောတိုးတက်မှုတွေ: ဝတ္ထုဟော်မုန်းအဘို့အဂယက်ရိုက်။ နံနက်။ ဂျေ Med ။ မျိုးရိုးဗီဇ။ ကို C seminal ။ Med ။ မျိုးရိုးဗီဇ။ 148C, 89-98 10.1002 / ajmg.c.30172 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McElhinny CJ, Jr. Lewin AH, Mascarella SW, Runyon အက်စ်, Brieaddy L. , ကာရိုး FI (2012) ။ အရေးကြီး orexin 1 အဲဒီ receptor ရန် SB-334867 ၏ Hydrolytic မတည်ငြိမ်မှု: အပေါ်ဖြစ်နိုင်သောသဖွငျ့ဆိုးကျိုးများ Vivo အတွက် နှင့် စသည်တို့အတွက် လေ့လာမှုများ။ Bioorg ။ Med ။ Chem ။ လက်တ။ 22, 6661-6664 10.1016 / j.bmcl.2012.08.109 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McElroy SL, အာနိုး LM, Shapira NA, Keck PE, Jr. Rosenthal ရော်ဘာ, Karim က MR, et al ။ (2003) ။ ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး: အဝလွန်သူနဲ့ဆက်စပ်မူးရူးစားရောဂါကုသမှုအတွက် Topiramate ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 160, 255-261 10.1176 / appi.ajp.160.2.255 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
နာရီတာအမ်, Nagumo Y. , Hashimoto အက်စ်, Khotib ဂျေ, Miyatake အမ်, Sakurai တီ (2006) ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အတွက် orexinergic စနစ်များတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 26, 398-405 10.1523 / JNEUROSCI.2761-05.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pañeda C. , Winsky-Sommerer R. , Boutrel ခ, က de Lecea L. (2005) ။ အဆိုပါ corticotropin-releasing အချက်-hypocretin ကွန်နက်ရှင်: စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စွဲလမ်းအတွက်ဂယက်ရိုက်။ မူးယစ်ဆေးသတင်းရှုထောင့်။ 18, 250-255 10.1358 / dnp.2005.18.4.908659 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pankevich DE, Teegarden SL, Hedin အေဒီ, Jensen CL, ဘေးလ် TL (2010) ။ ကယ်လိုရီကန့်သတ်အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် orexigenic လမ်းကြောင်း reprograms နှင့်မူးရူးစားအားပေးအားမြှောက်။ ဂျေ neuroscience ။ 30, 16399-16407 10.1523 / JNEUROSCI.1955-10.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pedram P. , ဝါဒန်ဃ, Amini P. , et al Gulliver ကဒဗလျူ, Randell အီး, Cahill အက်ဖ်။ (2013) ။ အစားအသောက်စွဲလမ်း: အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူ၎င်း၏ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့။ PLoS ONE 8: e74832 10.1371 / journal.pone.0074832 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Peyron C. , Tighe DK, ဗန်တွင်း et al Pol AN, က de Lecea L. , Heller HC, Sutcliffe JG ။ (1998) ။ မျိုးစုံအာရုံခံစနစ်များမှ hypocretin (orexin) စီမံကိန်းကို်အာရုံခံ။ ဂျေ neuroscience ။ 18, 9996-10015 [PubMed]
et al Piccoli L. , Micioni Di Bonaventura သင်္ဘော MV, Cifani C. , Costantini VJ, Massagrande အမ်, Montanari ဃ။ (2012) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မူးရူးစားတဲ့မော်ဒယ်ထဲမှာအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအစားအစာစားသုံးမှုအပေါ် orexin-1 အဲဒီ receptor ယန္တရားများ၏အခန်းက္ပ။ Neuropsychopharmacology 37, 1999-2011 10.1038 / npp.2012.48 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပလာဇာ-Zabala အေ, Flores အေ, Maldonado R. , Berrendero အက်ဖ် (2012) ။ အဆိုပါ hypothalamic paraventricular နျူကလိယထဲမှာအချက်ပြ Hypocretin / Orexin နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 71, 214-223 10.1016 / j.biopsych.2011.06.025 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပလာဇာ-Zabala အေ, Martin-Garcia အီး, က de Lecea L. , Maldonado R. , Berrendero အက်ဖ် (2010) ။ Hypocretins နီကိုတင်း၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထိန်းညှိခြင်းနှင့်နီကိုတင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement သွေးဆောင်။ ဂျေ neuroscience ။ 30, 2300-2310 10.1523 / JNEUROSCI.5724-09.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Richards JK, Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ Steensland P. , Taha လုပ် SA, Borgland SL, Bonci အေ, et al ။ (2008) ။ orexin-1 / hypocretin-1 receptors ၏တားစီးအီသနောနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ Evans ကြွက်များတွင်ရှာကြံ sucrose ၏ yohimbine-သွေးဆောင် reinstatement ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 199, 109-117 10.1007 / s00213-008-1136-5 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော့ဂျာ RJ, Wright FL, နှင်းအဲန်အက်ဖ်, တေလာ LJ (2013) ။ Orexin-1 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းပေါင်း-ဝင်္-ရင်တော့မှားမယ်သို့မဟုတ်ပေါင်း-ဝင်္-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်ဖြစ်စေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူလျှော့ချရန်ပျက်ကွက်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 243, 213-219 10.1016 / j.bbr.2012.12.064 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rotter အေ, Bayerlein K. , Hansbauer အမ်, Weiland ဂျေ, Sperling ဒဗလျူ, Kornhuber ဂျေ, et al ။ (2012) ။ နီကိုတင်း-မှီခိုစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက်တစ်ဦးကစကားရပ်နှင့်ကမကထ methylation Orexin ။ Neuropsychobiology 66, 126-133 10.1159 / 000339457 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Scammell TE, Winrow CJ (2011) ။ Orexin receptors: ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ကုထုံးအခွင့်အလမ်းများ။ Annu ။ ဗျာ Pharmacol ။ Toxicol ။ 51, 243-266 10.1146 / annurev-pharmtox-010510-100528 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sears RM, က Fink AE, Wigestrand ကို MB, Farb CR, က de Lecea L. , Ledoux je (2013) ။ Orexin / hypocretin စနစ် locus coeruleus မှတဆင့်သင်ယူ amygdala-မှီခိုခြိမ်းခြောက်မှု modulates ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 110, 20260-20265 10.1073 / pnas.1320325110 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Seymour PA ဆိုပြီး, Schmidt က AW, Schulz DW (2003) ။ က CP-154,526, အ CRH1 အဲဒီ receptor ၏ non-peptide ရန်၏ဆေးဝါးဗေဒ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ CNS မူးယစ်ဆေးဗျာ 9, 57-96 10.1111 / j.1527-3458.2003.tb00244.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရှင် LM, Liberzon ဗြဲ (2009) ။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကရောဂါ၏ neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35, 169-191 10.1038 / npp.2009.83 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စမတ်ဃ, et al Sabido-ဒါဝိဒ်သည် C. , Brough SJ, Jewitt အက်ဖ်, Johns အေ, Porter RA ။ (2001) ။ SB-334867-တစ်ဦးက: ပထမဦးဆုံးရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 132, 1179-1182 10.1038 / sj.bjp.0703953 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Smith က DG, Robbins TW (2013) ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးရူးစား၏ neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံ: အစားအစာစွဲမော်ဒယ်ချမှတ်များအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 73, 804-810 10.1016 / j.biopsych.2012.08.026 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Soya အက်စ်, Shoji အိပ်ချ်, Hasegawa အီး, Hondo အမ်, Miyakawa တီ, Yanagisawa အမ်, et al ။ (2013) ။ Orexin အဲဒီ receptor-1 အဆိုပါ locus coeruleus အတွက် cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 33, 14549-14557 10.1523 / JNEUROSCI.1130-13.2013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steiner MA, Gatfield ဂျေ, et al Brisbare-Roche C. , Dietrich အိပ်ချ်, Treiber အေ, Jenck အက်ဖ်။ (2013) ။ ACT-335827 တစ်ဦးနှုတ်မရရှိနိုင်ပါ, ဦးနှောက်ထိုးဖောက်မှု orexin အဲဒီ receptor type1 ရွေးချယ်ရန်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ChemMedChem 8, 898-903 10.1002 / cmdc.201300003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steiner MA, Lecourt အိပ်ချ်, Jenck အက်ဖ် (2012) ။ ကြွက်များတွင်ကွောကျမကျအေးစက်ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက် orexin စနစ်နှင့် almorexant ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 223, 465-475 10.1007 / s00213-012-2736-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tsujino N. , Sakurai တီ (2013) ။ arousal, နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်လှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲပစ်အတွက် orexin ၏အခန်းက္ပ။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 7: 28 10.3389 / fnbeh.2013.00028 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Volkow ND, ပညာရှိ RA (2005) ။ ဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးစွဲကျွန်တော်တို့ကိုအဝလွန်ခြင်းကိုနားလည်ကူညီပေးနိုငျသနညျး နတ်။ neuroscience ။ 8, 555-560 10.1038 / nn1452 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al ဗွန် der Goltz C. , Koopmann အေ, Dinter C. , ရစ်ချတာအေ, Grosshans အမ်, က Fink တီ။ (2011) ။ အရက်မှီခိုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် orexin ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 60, 644-650 10.1016 / j.yhbeh.2011.08.017 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al ဗွန် der Goltz C. , Koopmann အေ, Dinter C. , ရစ်ချတာအေ, Rockenbach C. , Grosshans အမ်။ (2010) ။ Orexin နှင့် leptin နီကိုတင်းတဏှာနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်: ဆေးလိပ်သောက်, အစာစားချင်စိတ်များနှင့်အကြိုးကိုအကြား link တစ်ခု။ Psychoneuroendocrinology 35, 570-577 10.1016 / j.psyneuen.2009.09.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ်ခ, သင် ZB, ပညာရှိ RA (2009) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ hypocretin / orexin အားဖြင့်ရှာကြံကင်း၏ Reinstatement: ဒေသခံ corticotropin-releasing အချက်ကွန်ယက်မှလွတ်လပ်ရေး။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 65, 857-862 10.1016 / j.biopsych.2009.01.018 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
White က CL, Ishii Y. , Mendoza တီ, Upton N. , ရှတာဇီ LP သို့အသွင်ဆောင်လာကြောင်း GA, et al ။ (2005) ။ အစားအသောက်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်ကွာခြားကြောင်းကြွက်နှစ်ခုမျိုးကွဲအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်တစ်ဦးရွေးချယ် OX1R ရန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Peptides 26, 2331-2338 10.1016 / j.peptides.2005.03.042 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝူ MF, Nienhuis R. , Maidment N. , Lam HA, Siegel JM (2011) ။ hypocretin အဆင့်နှင့် cataplexy ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် hypocretin ၏အခန်းက္ပ (orexin) အဲဒီ receptor2(Hcrt-r2) ။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 6305-6310 10.1523 / JNEUROSCI.0365-11.2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Yamanaka အေ, Beuckmann မှန် CT, ဝီလီ JT, Hara ဂျေ, Tsujino N. , Mieda အမ်, et al ။ (2003) ။ Hypothalamic orexin အာရုံခံကြွက်များတွင်စွမ်းအင်ဟန်ချက်အညီ arousal ထိန်းညှိ။ အာရုံခံဆဲလျ 38, 701-713 10.1016 / S0896-6273 (03) 00331-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zheng အိပ်ချ်, ပက် LM, Berthoud HR (2007) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Orexin အချက်ပြသည့်နျူကလိယ accumbens ၏ opioid ဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် High-အဆီအစာစားချင်စိတ်အဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 11075-11082 10.1523 / JNEUROSCI.3542-07.2007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhu Ly, Summah အိပ်ချ်, Jiang HN, Qu JM (2011) ။ hypercapnic အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်နှင့်အတူ COPD လူနာ plasma orexin-တစ်ဦးအဆင့်ဆင့်။ အကျိုးဆောင်ရောင်ရမ်းခြင်း။ 2011, 754847 10.1155 / 2011 / 754847 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zorrilla EP, Koob gf (2004) ။ စိုးရိမ်စိတ်အဘို့အ CRF1 ရန်များ၏ကုထုံးအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူ Opin ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါး 13, 799-828 10.1517 / 13543784.13.7.799 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]